लेनोभो Thinkpad X1 गोली समीक्षा - समाचार नियम
लेनोभो Thinkpad X1 गोली समीक्षा
ठूलो स्क्रिन, मजबूत डिजाइन, शानदार किबोर्ड र Thunderbolt3तेस्रो-पुस्ता ThinkPad X1 गोली एक शक्तिशाली संयोजन
शीर्षक यो लेख “लेनोभो Thinkpad X1 गोली समीक्षा: रूपमा सतह प्रो रूपमा तर यूएसबी-सी राम्रो” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 11 औं अक्टोबर मा theguardian.com 2018 06.00 UTC
लेनोभो तेस्रो-पुस्ता ThinkPad X1 गोली एक कुनै-समझौता विन्डोज हुन गर्ने लक्ष्य लिएको छ 10 प्रयोगकर्ता दिन्छ कि अलग गर्न सकिने के माईक्रोसफ्टका सतह गर्दैनन्: युएसबी-सी र Thunderbolt 3.
फारम कारक परिचित छ. वास्तविक कम्प्युटर कि राम्रो टाइप लागि कोण मा बस्छन फिर्ता बाहिर kickstand र magnetically संलग्न किबोर्ड संग एक 8.9mm बाक्लो ट्याब्लेट मा निचोडा छ.
तर यहाँ लेनोभो को विजेता minimalist सतह 2-मा 1 सूत्र बाट प्रस्थान, यस्तो ईशारा निपल रूपमा ThinkPad खाद्यान्नहरूको ल्याउन, ट्रयाकप्याड बटन, बाल्टिन आकारको किबोर्ड कुञ्जीहरू र वैकल्पिक सडक-योद्धा अपिल 4G.
भन्न होइन यो एउटा शुद्ध workhorse छ, तर मत्ती कालो रंग काम, पुरातन-देख ThinkPad लोगो र रातो हाइलाइट पक्कै पनि सामान रही गरेको बारे यो मिसिन छ छाप दिन.
को 13in स्क्रीन मा तपाईं छौँ पाउन भन्दा ठूलो छ सतह प्रो र हव्वाले वी, र यो सजिलो एक ल्यापटप रूपमा एकल प्रयोग बनाउँछ. स्क्रिन नै पिन-ठिक छ, रंगीन र बस बारेमा बाहिर प्रयोग गर्न पर्याप्त उज्यालो. चलचित्र मा महान, राम्रो हेर्ने कोण संग, र, जबकि बाहिर वरिपरि bezels एकदम ठूलो, तिनीहरूले दुई अगाडिको वक्ता समायोजित, एक औंठाछाप स्क्यानर र विन्डोज नमस्कार-सक्षम आईआर अनुहार पहिचान प्रणाली.
को kickstand रूपमा सतह प्रो त्यस रूपमा र एक अलग गर्न सकिने ट्याब्लेट अप propping लागि टाढा सबै भन्दा राम्रो समाधान द्वारा राम्रो छ, या त आफ्नो वा किबोर्ड जडान. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
पछाडि गति को एक व्यापक कोण संग एक ठोस-भावना kickstand छ, जो सतह प्रो को पछाडि भन्ने रूपमा जस्तै राम्रो छ, र आफ्नो काखमा वा डेस्क मा सही कोण रही लागि पूर्ण.
अगाडि-सामना वक्ता सायद मिडिया मिसिन रूपमा X1 गोली प्रयोग कमजोर बिन्दु हो, किनभने हुनत उनि अपेक्षाकृत स्पष्ट र विकृति-मुक्त छन्, तिनीहरूले पनि धेरै ठूलो हुनुहुन्न र बास को कुनै पनि प्रकारको कमी. तपाईं हुनुहुन्छ भने तिनीहरू ठीक हुनेछु हात-पकड एक टिभि हेर्न मिसिन, तर खाना पकाउन र के एक संडसी प्रशंसक भन्दा जाँदै गर्नुपर्छ सुनेपछि गर्दा केही हेर्दै एक कुनै-जाने छ.
को X1 गोली भन्दा बढी टिकाउ डिजाइन गरिएको छ. स्क्रिन गोरिल्ला ग्लास को एक पानामा समेटिएको छ, प्रतियोगिता को सबै भन्दा जस्तै, तर ThinkPad लाइन चिस्यान विरुद्ध परीक्षणमा अतिरिक्त माइल जाँदै एक इतिहास छ, कम्पन र यांत्रिक आघात, यो दैनिक jolts सामना गर्नुपर्छ अर्थ र नियमित यात्रा को jostles.
पर्दा: 13QHD + एलसीडी मा
प्रोसेसर: इन्टेल ट्रयाक्टर-कोर कोर i5 वा i7 (8औं पुस्ता)
राम: 8 वा 16GB
भण्डारण: 256, 512जीबी वा 1TB SSD
संचालन प्रणाली: विन्डोज 10 घर वा प्रो
क्यामेरा: 8सांसद पछि, 2सांसद अगाडिको
जडान: wifi एसी, ब्लूटूथ 4.1, 2एक्स Thunderbolt3(USB-सी), हेडफोन, टीपीएम, microSD, अनुहार पहिचान, औंठाछाप स्क्यानर, वैकल्पिक नैनो सिम र NFC
आयाम: 304.1 x 226 x 8.9mm (15.1किबोर्ड संग मिमी)
वजन: 890जी (1,270किबोर्ड संग G)
उच्च-अन्त ultraportable प्रदर्शन
ट्याब्लेट र किबोर्ड चुम्बक साथ सँगै स्न्याप. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
एक्स श्रृंखला लेनोभो शीर्ष अन्तमा ThinkPad लाइन छ, जो X1 गोली तपाईं चाहनुहुन्छ चाहाने सबै शक्ति आउँछ अर्थ.
कि नवीनतम आठौं-पुस्ता ट्रयाक्टर-कोर इन्टेल i5 वा i7 प्रोसेसर को आफ्नो रुचि समावेश, 8 वा राम र भण्डारण प्रशस्त को 16GB.
परीक्षण रूपमा मिसिन एक इंटेल कोर i7-8550U प्रोसेसर थियो, 16राम जीबी, 512भण्डारण र 4G को जीबी, र बिल्कुल म मा फाले सबै मार्फत उड्यो.
एकीकृत इंटेल UHD गर्दा 620 ग्राफिक्स कार्ड X1 गोली को weakest बिन्दु हुन सक्छ, मेशिन एक पसिना को धेरै तोडने बिना केही भारी 23,000-पिक्सेल चौडा तस्बिरहरू ह्यान्डल गर्न व्यवस्थित.
ट्याब्लेट मा प्रशंसक केही प्रतियोगिहरु भन्दा बढी अक्सर अप आगो, तर तपाईं केहि धेरै प्रोसेसर-गहन गरिरहनुभएको नभएसम्म तिनीहरूले पनि विशेष चर्को प्राप्त छैन. अधिकांश समय तिनीहरूले एक कार्यालय वातावरणमा अश्राव्य हुनुहुन्छ.
समग्र प्रदर्शन उत्कृष्ट छ, एक उच्च अन्तमा ultraportable मिसिन को कि मिल्ने, तर यसमा कट्टर खेल के आशा छैन - म बाह्य ग्राफिक्स कार्ड संग प्रयास गरेनन्.
यो मत्ती कालो अलि नीरस देखिन्छ, तर यो खरोंच र सी खरोंच राम्रो प्रतिरोध गर्नेछौं जस्तै महसुस. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सबैभन्दा पीसी ट्याब्लेटको मा बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा ब्याट्री जीवन छ. लेनोभो नौ-र-एक-आधा घण्टा "थप-सबै-दिन भन्दा" ब्याट्री जीवन उद्धरण, तर वास्तविकता ThinkPad X1 गोली चार्ज मात्र वरिपरि सात घण्टा रहन्छ छ. कि "राम्रो ब्याट्री जीवन" शक्ति सक्रिय सेट थियो, Typora मा शब्द संसाधन, Chrome मा ब्राउजिङ, Nextgen पाठक प्रयोग, Affinity फोटो केही छवि सम्पादन र Microsoft मेल इमेल धेरै.
यो एक दिन काम को सबै भन्दा मार्फत प्राप्त गर्न पर्याप्त छ, तर गहन दिन मा घर मा चार्जर छोड्न पर्याप्त छैन. चार्ज गर्न यो USB पावर वितरण प्रयोग खुसीको रूपमा, पर्याप्त wattage संग कुनै पनि युएसबी-सी चार्जर यस्तो अन्य ल्याप्टप वा 30W वा थप राख्दै बहु-चार्जर्स संग पठाइएको ती रूपमा काम गर्नुपर्छ.
Thunderbolt3बन्दरगाह
दुई Thunderbolt3बन्दरगाह, एक केंसिंग्टन लक स्लट र एक सिम ट्रे एक पक्ष मा सबै छन्. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
को X1 गोली बस दुई Thunderbolt आउँछ3युएसबी-सी बंदरगाहों रूपमा दोहोरो कि बंदरगाहों. भइरहेको Thunderbolt3को विस्तार क्षमताहरु अनन्त छन् रूपमा एक विशाल Boon छ, चार्ज एक कर्ड को पवित्र Grail सहित, एक4हजार मनिटर र तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ हरेक अन्य परिधीय जडान. यो कमी कि पनि युएसबी-सी प्रतियोगिहरु भन्दा एक महत्वपूर्ण फाइदा छ.
तथापि, मात्र दुई बन्दरगाह भएको, जो एक शक्ति आवश्यक हुनेछ, तपाईं नाउ वा हब भर हुनेछ अर्थ. यो भन्दा लागि यस्तो ठूलो सम्झौता होइन, तर पोर्ट-जग्लिङ एक बिट अपरिहार्य छ तपाईंले केही क्रमबद्ध एक डक लगानी छैन भने.
एक microSD कार्ड पाठक पनि त्यहाँ, जो ठूलो छ, तर यो जुन तपाईं स्मार्टफोन मा फेला थियो एक समान सिम-स्लट लुकेका गर्नुपर्छ. तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सिम बेदखलदार उपकरण आवश्यक रूपमा एक तातो-swappable मेमोरी कार्ड पाठक रूपमा व्यावहारिक छ, तपाईं एकै समयमा एक भयो भने र यो 4G सिम निकाल्दै मतलब.
किबोर्ड उत्कृष्ट छ, र सबै भन्दा ल्याप्टप भन्दा राम्रो. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
माईक्रोसफ्टका सतह प्रो विपरीत, को X1 गोली किबोर्ड आउँछ, र के किबोर्ड यो छ. विन्डोज 10 detachables जस्तै यो प्रत्यक्ष वा कीबोर्ड गुणस्तर द्वारा मर्न, अधिकांश समय तिनीहरूले एक ल्यापटप जस्तै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ.
लेनोभो गरेको किबोर्ड म कुनै पनि अलग गर्न सकिने प्रयोग गरेका सबै भन्दा राम्रो छ, र ल्याप्टप को विशाल बहुमत भन्दा राम्रो. साँचाहरू पूर्ण आकारको छन्, ठोस, आफ्नो औंलाहरु अन्तर्गत ठूलो महसुस र एक आरामदायक लागि बनाउन पर्याप्त यात्रा छ, सन्तोषजनक टाइप अनुभव.
ट्र्याकप्याड उत्तिकै राम्रो छ. यो धेरै ठूलो छ, एक चिल्लो छ, सटीक सतह र यो एउटा ठोस क्लिक, रूपमा विकल्पहरू प्रशस्त अनुभव अनुकूलन गर्न साथै. तर त्यहाँ पनि जी बीच सानो रातो निपल TrackPoint को रूप मा एक ThinkPad stalwart छ, एच र बी कुञ्जीहरू, र स्पेसबार र ट्रयाकप्याड बीच तीन माउस बटन. म जहाँ किबोर्ड को अन्त शून्य legroom ट्र्याकप्याड अवरुद्ध मेरो पेट मा अप थिचिएको थियो रेल मा जब बाहेक तिनीहरूलाई लागि सानो प्रयोग फेला.
किबोर्ड यसको quirks छैन, यस्तो तल मा Fn प्रमुख Ctrl सट्टा कुना बाँकी रूपमा, म थियो केहि लगभग तुरुन्त मांसपेशी-स्मृति कट र पेस्ट लागि सेटिङमा राउन्ड स्विच. त्यहाँ त कुनै पनि मिडिया कुञ्जीहरू छैनन्.
औंठाछाप स्क्यानर एक बिट अनौठो सेट अप छ, तर राम्रो काम गर्दछ तपाईं अनुहार पहिचान सिस्टम प्रयोग गर्न चाहेको बेला. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
को X1 गोली एक आईआर आधारित अनुहार पहिचान सिस्टम माईक्रोसफ्टका सतह लाइन मा कि रूपमा जस्तै राम्रो भन्ने छ. यसलाई लक-स्क्रिन देखि पहिचान र स्वचालित रूपमा तपाईं लग, लग इन सहज बनाउन.
एक औंठाछाप स्क्यानर पनि त्यहाँ, जो ट्याप र आफ्नो फिंगरप्रिन्ट दर्ताको लागि सफा एक अलिकति अनौठो संयोजन छ, तर दिन-को दिन सञ्चालन राम्रो तरिकाले काम गर्दछ. अनुहार पहिचान त राम्रो काम गरे रूपमा म डेस्क मा यो प्रयोग गरेर अन्त छैन, जब पोट्रेट हाते तर यो ट्याब्लेट अनलक लागि उपयोगी थियो, र थप बायोमेट्रिक विकल्प राम्रो.
किबोर्ड खोलेर देखि X1 गोली अन गर्न तपाईं पावर बटन हिट वा किबोर्ड मा Fn कुञ्जी थिच्न छ
तपाईं Windows को एक विकल्प प्राप्त 10 घर वा प्रो
वैकल्पिक ThinkPad पेन प्रो एक अलग गर्न सकिने होल्डर संग मिसिन छेउमा मा क्लिप र अप अंकन वा हस्ताक्षर कागजातहरू लागि राम्रो काम गर्छ
को लेनोभो सहूलियत अनुप्रयोग चालक अद्यावधिक र सेटिङहरू हेरविचार न्यूनतम जायका संग X1 गोली गर्न Bespoke लिन्छ
तेस्रो-पुस्ता लेनोभो ThinkPad X1 गोली मा सुरु £ 1.480 एक कोर i5 प्रोसेसर संग, 8राम जीबी, 256भण्डारण र किबोर्ड को जीबी र सबै विकल्प संग £ 2.422 मा बाहिर tops.
परीक्षण रूपमा मिसिन एक कोर i7 प्रोसेसर संग £ 1,973.59 खर्च, 16राम जीबी, 512भण्डारण र 4G को जीबी.
तुलना लागि, माईक्रोसफ्टका सतह प्रो6मा सुरु £ 879, संग मोडेल त्यस्तै गरी X1 गोली दाम.
को ThinkPad X1 गोली लेनोभो बनाउन सक्छ कि ठूलो अलग गर्न सकिने 2-मा 1 विन्डोज प्रमाणित गर्छ 10 ट्याब्लेट कम्प्युटर. यसलाई सस्तो छैन, तर यसको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी को माइक्रोसफ्ट सतह प्रो भन्दा समान वा अझ राम्रो विनिर्देशों प्रदान गर्दछ, Thunderbolt को धेरै-आवश्यक आधुनिक पोर्ट चयन सहित 3.
को X1 गोली जस्तै यो एक पिटाइ लाग्न सक्छ र मोबाइल काम को rigors बच्नेछन् महसुस, जो के यसको लागि डिजाइन भएको थियो छ. स्क्रिन ठूलो छ, र 13in मा एक आदर्श आकार छ, को kickstand र किबोर्ड शानदार छन् र प्रदर्शन शीर्ष निशान छ.
सात-घण्टा ब्याट्री जीवन राम्रो हुन सक्छ, तर एकीकृत 4G र दुई बायोमेट्रिक विकल्प स्वागत थपिएको हो. यो अझै पनि प्ले भन्दा काम को लागि एक राम्रो मेसिनको, तर यो नभएसम्म तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ सबै कोठा मार्फत अवलोकन भिडियो छ डबल कर्तव्य पुल एकदम राम्रो छ.
तपाईं एक शीर्ष अन्तमा 2-मा 1 Windows को लागि बजार मा हुनुहुन्छ भने 10 अलग गर्न सकिने, को लेनोभो ThinkPad X1 गोली आफ्नो सूची हुनुपर्छ.
पेशेवरों: ठोस निर्माण, राम्रो स्क्रिन, शानदार किबोर्ड, Thunderbolt 3, वैकल्पिक 4G, microSD कार्ड पाठक, औंठाछाप स्क्यानर, अनुहार पहिचान
नकारात्मक: मात्र दुई युएसबी-सी बंदरगाहों, microSD कार्ड पाठक सजिलै पहुँच छैन, महंगा
मा रातो डट 'म' glows मिसिन स्ट्यान्डबाइ हुँदा. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
माइक्रोसफ्ट सतह प्रो समीक्षा: धेरै लगभग लगभग विन्डोज पीसी भविष्य
माइक्रोसफ्ट सतह जाओ समीक्षा: प्ले भन्दा कामको लागि राम्रो भन्ने ट्याब्लेट
माइक्रोसफ्ट सतह बुक2समीक्षा: एक शक्तिशाली अझै pricey ल्यापटप-ट्याब्लेट कम्बो
हव्वाले वी समीक्षा: पावर प्रयोगकर्ताका लागि upstart विन्डोज ट्याब्लेट ठूलो क्षमता छ
सैमसंग ग्यालेक्सी S6 किनारा समीक्षा
सैमसंग ग्यालेक्सी S4 जूम भिडियो समीक्षा